Iyo Servant yakateerana inotanga kuratidzwa munaNovember 28 paApple TV + uye isu tine yekutanga turera | IPhone nhau
Kana iwe watove nemukana wekunakidzwa nekatalog yese iripo paApple TV + uye wakamirira zvikamu zvitsva, parizvino uchafanirwa kumirira kusvika munaNovember 28 anotevera, zuva iro Apple achazivisa zviri pamutemo iyo M. Husiku Shyamalan Servant akateedzana.
Kuti asimudzire kuvhurwa kweiyi nhepfenyuro nyowani, vakomana vanobva kuCupertino vakatumira pane yavo YouTube chiteshi un turera nyowani inopfuura maminetsi maviri (hapana chekuita neaya andakange ndatsikisa masekonzi gumi nemashanu apfuura) uko kwatingawane pfungwa yekuti Shyamalan achatipa chii.
Muranda anotaurira nyaya yevaviri Dorothy naSean, vakatamba naLauren Ambrose naToby Kebbell, vanoda vanotambura nhamo inotyisa iyo inovhura musuwo wemba yavo kusimba risinganzwisisike... uye parizvino ndinogona kutaura kuti gare gare vanondipomera mhosva yekutsikisa vapambi. Kana iwe ukatarisa iyo tirera, iwe unozoziva zvakawanda nezve izvi zvakateedzana zvinotaridzika zvakanaka kwazvo kune avo vedu vanofarira rudzi.
Pari zvino isu hatizive kana Apple iri kuda kusungirira zvese zvikamu kubva mwaka wekutanga we kushumira, sekune zvakateedzana naDickinson, kana kana iwe ukawedzera matatu ekutanga, sekune akateedzana The Morning Show, ona y Kune vanhu vese. Tichafanirwa kumirira kusvika Mbudzi 28 kuti tizive mhinduro.
Shyamalan anozivikanwa kubva mumamuvhi Sense yechitanhatu, The protégé, Chiitiko ichi uye mamwe mafirimu asingazivikanwe, Ndakanga ndamboshanda paterevhizheni pamwe akatevedzana Wayward Pines, nhevedzano inotarisa Mat Dillon iyo zvinosiririsa kuti yaive nemwaka miviri chete asi iyo yakatipa nharo inopfuura inonakidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Iyo Servant yakateerana inotanga kuratidzwa munaNovember 28 paApple TV + uye isu tatova netrailer yekutanga
Samsung uye Sony ikozvino vaine Apple TV app iripo